New Book Coming Nokukurumidza — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
bhuku rangu idzva, simuka, anobuda January yechi27! Zvichava kuwanikwa pose dzinotengeswa mabhuku. Unogona kufanoodha izvozvi woshanyira webhusaiti yebhuku pa Risebook.tv. Ndinonamata Jehovha achashandisa nayo kukurudzira chizvarwa changu kuti simuka kurarama. Watch turera kumusoro uye verenga tsanangudzo pfupi bhuku pazasi:
Burton • Zvita 4, 2014 pa 6:29 pm • pindura
David • Zvita 25, 2014 pa 3:25 pm • pindura